रोचक - Page2of6- पब्लिक समाचार
सर्ब प्रथम हामी मानव जातीमा आफु सधै आर्थिक भौतिक र नैतिक रुपमा सम्पन्न नै चाहान्छौ तर कारण बस त्यो सबै चाहानाहरु पुरा हुदैन् । धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र जसको लागि मानिसहरू दिन रात नभनी आफ्नो मेहेनत र पसिना पगाउन विस छन् । तर लाखौ प्रयासहरु गर्दा गर्दै पनि सफल्ता हात […]
काठमाडौँ,बैशाख ४ । कम्प्युटरको स्क्रिन र मोबाइल फोनहरूबाट निस्कने निलो प्रकाश लामो समयसम्म छालामा पर्दा छालासम्बन्धी रोगहरु निम्त्याउन सक्छ । समय पूर्व नै बुढो देखिने लगायत छालाको रंग परिवर्तन हुने लगायत समस्या निम्तिन सक्छ । निलो प्रकाशबाट हुने हानी रोक्न थुप्रै व्युटि प्रोडक्टहरूले एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त क्रिमहरू उत्पादन गर्न थालिसकेका छन् । यस्ता प्रकाशले छालामा हुने हानी […]
काठमाडौँ,चैत ३१ । ह्वाइट डिस्चार्ज आम महिलामा हुने समस्या हो । यसले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो असर पनि गर्छ। ह्वाइट डिस्चार्जलाई सेतो पानी वा लिकोरिया पनि भन्ने गरिन्छ।महिनावारीको अघिपछि यस्तो पानी बग्नु धेरैको समस्या हो। कतिपय अवस्थामा यो अधिक मात्रामा हुने गर्छ। यसले अन्य रोगको संकेत पनि गर्नेगर्छ । सेतो पानी बग्ने कारण – आफ्नो संवेदनशील […]
केही खानेकुरा छन जुन धेरै खाँदा सोझै मृगौलालाई असर गर्दछ। यदि हामी स्वास्थ्य रहन चाहान्छौ भने यी खानालाइ धेरै हदसम्म ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मृगौलालाई ड्यामेज बनाउन सक्ने खानाहरु के–के हुन् । नुन अथवा सोडियम नुनमा सोडियमको मात्रा बढी हुने गर्दछ। सोडियमको मात्रा शरीरमा बढ्ने बितिक्कै किड्नी मै पहिलो असर गर्न सुरु हुन्छ‌। हाम्रो […]
एजेन्सी । गार्मी महिना बढे संगै आमीले पानी, बिन्नि पिय पर्दा, लगाएत खाना जन्य बस्तुहरु फ्रिजमा राख्ने गर्छौ । खानेकुराहरू फ्रीजमा राख्दा ताजा बस्छ भनेर उनीहरूले यसो गरेका हुन् । तर फ्रीजले खानेकुराको स्वाद बिगारिदिन पनि सक्छ । तर फ्रीजमा सबै किसिमका खानेकुरा राख्नु हुँदैन । तपाईंको फ्रीजमा यी खानेकुरा छन् भने निकालिहाल्नुस् । पाउरोटी […]
काडमाडौ,चैत २७ । बर्तमान अवस्थामा एउटा यस्तो प्रचलन आयो कि, कुनै भएको कुरा भन्दा भिन्दै भरक देखिएमा त्यसलाई नेपाली समाजले सामाजिक संञ्जालको माध्यमबाछ भाईरल गर्ने गरेको पाईन्छ । टिकटक, फेस्बुक र युटयुबको जमानामा कतिबेला के भाईरल हुन्छ भन्ने कुराको केही अतोपतोनै हुदैन । आज हामी त्यस्तै रिपोर्ट लिएर आएका छौ, जुन टिकटकको १० सेकेन्डको भिडियोलाई […]
केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा बच्चाको फोटो निकै भाइरल भएको थियो । कालो वर्णको बच्चा जन्मनु स्वाभाविक नै हो । तर, गाडा कालो रङ्गको बच्चा जन्मिएपछि धेरै मानिसको चासोको विषय बनेको थियो । भाइरल भएको बच्चाको तस्बिरमा बच्चाको छाला निकै नै कालो देखिन्छ । आफैँमा कीर्तिमान भएको कारणले बच्चाको नाम विश्वकै कालो बच्चाको नाममा […]
ल्मिको मुसिकोट नगरपालिका ५ आमचौर भन्ने ठाउमा बसोबास गर्दै आएका त्यो भाइरल परिवार अझ भनौ बसन्ति दिदी भन्दा सायदै नचिन्ने कोहि हुदो हो ।यत्रतत्र सर्वत्र नै यो परिवारको चर्चा छ । होचि दिदी बसन्ति जो अहिले सुत्केरि अवस्थामा हुनुहुन्छ ।आफू कदको हिसाबमा निकै सानो भएको हुदा बच्चालाई जन्मदिन कष्ट हुने हुदा स्वयम् आफू अनि पेटमा […]
सपनाको अर्थ के हो ? कस्तो सपना देख्दा राम्रो र नराम्रो हुन्छ ?
एजेन्सी । सपना सबैले देख्ने गर्छन्। अवचेतन मनमा भएका कुरालाई हाम्रो अगाडी ल्याएर देखाउने माध्यमलाई सपना भनिन्छ । यस्तै हरेक समयमा देखिएको सपनाको आ आफ्नै महत्व हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रले बिहान देखिएको सपना सत्य साबित हुने गरेको बताएका छन्। यदि तपाईले बिहानको समयमा यस्ता सपनाहरु देख्नु भएको छ भने त्यो सपना तपाईको लागि निकै शुभ हुनेछ। […]
एजेन्सी । एउटा यतार्थ तितो समयल १९ वर्षकी किशोरीलाई एक युवाले फकाएर आफ्नो घरमा बोलाए । उनको नियत ठिक थिएन । उनले ति किशोरीलाई कर णी गरे । त्यतीमै मात्र उनी रोकिएनन् । अब त्यो घटना लुकाउन उनले गरेको प्रयास सुन्दा मुटु कहालिन्छ । उनले टाउको अल गग रे । सबै औंलाका नङ, र दाँत […]
<<- Page 1 Page2Page3… Page6->>